China Art & Design ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Donghua
Thermoplastics bụ ezigbo ụzọ maka ngosipụta na ihe ọhụrụ. Nhọrọ anyị nke dị elu, ọtụtụ mpempe akwụkwọ acrylic na ngwa enyo enyo na-enyere ndị na-emepụta aka iweta ọhụụ ha na ndụ. Anyị na-enye a dịgasị iche iche nke agba, ọkpụrụkpụ, ihe nakawa etu esi, mpempe akwụkwọ nha na polima formulations iji gboo mkpa nke imerime nka na imewe ngwa.
• Mgbidi Mgbidi
• urnkwado ụlọ
Thermoplastics bụ ezigbo ụzọ maka ngosipụta na ihe ọhụrụ. Nhọrọ anyị nke dị elu, ọtụtụ mpempe akwụkwọ acrylic na ngwa enyo enyo na-enyere ndị na-emepụta aka iweta ọhụụ ha na ndụ. Anyị na-enye a dịgasị iche iche nke agba, ọkpụrụkpụ, ihe nakawa etu esi, mpempe akwụkwọ nha na polima formulations iji gboo mkpa nke imerime nka na imewe ngwa. Anyị na-enye nnukwu nhọrọ nke acrylic aghụghọ & n'ichepụta maka ndị na-ere ahịa & azụmaahịa na mma ụlọ jiri ọtụtụ usoro ịtụ - site na ọkpụrụkpụ na usoro na site na agba ruo ngwụcha.
Site na ichebe ngosipụta na foto, acrylic bụ nhọrọ kachasị maka ngwa glazing. Ngosi ngosi ihe mgbe ochie na ihe ngosi ndị ọzọ na-eritekwa uru site na nzacha UV nke acrylic. Ọbụghị naanị na acrylic ga - echekwa nka - ọ bụ nka. Acryli bu ezigbo uzo maka okike.
DHUA Acrylics bụ ụzọ ejiji na nke ọhụụ iji weta udo, nkwekọ na mmekọrịta ịhụnanya n'ụlọ gị ma ọ bụ ihe ndozi ọfịs. Ihe ndozi mgbidi acrylic bụ nke na-adịghị egbu egbu, nke na-abụghị friable, nchekwa gburugburu ebe obibi na mgbochi corrosion. Ọ dị mma maka ịchọ mma mgbidi dị n'ime ma ọ bụ windo nke ime ụlọ, ime ụlọ, ma ọ bụ ụlọ ahịa. Ọ dịghị nsogbu ọ bụla metụtara gburugburu ebe obibi na ahụike.
Mpempe akwụkwọ acryli bụ ụzọ dị ugbu a iji gosipụta foto, ọrụ aka, akara ngosi, ozi ahịa ma ọ bụ onyonyo ọ bụla ọ bụla na mpempe akwụkwọ mara mma. Ọ na-agbanwe onyonyo gị ka ọ bụrụ ọmarịcha ọrụ kacha mma mgbe ị bipụtara foto gị ma ọ bụ ọmarịcha ihe osise ozugbo na acrylic plexiglass. DHUA acrylic bụ ngwaahịa nke nhọrọ maka ndị na-emepụta akara na ndị na-emepụta ihe n'ihi ogologo oge, ihu igwe na ịdị mfe nke thermoforming.
Site na ebe ịzụ ahịa (POP) na-egosipụta na ngosipụta ihe ngosi nka, DHUA acrylic bụ ezigbo ihe maka ngosipụta ngosi na ngosipụta ikpe / igbe n'ihi oke mma acrylic materail gosipụtara na shatterproof, optically Pure, lightweight, cost irè, vasatail na mfe echepụtara. Ọ na-eme ụdị gị na ngwaahịa gị.
Acrylic nwere ọdịdị nke iko nke na-enye ya ụdị pụrụ iche. Mpempe akwụkwọ acrylic bụ mkpụrụ osisi kachasị mma maka ịme akwa tabletops, shelf na ebe ndị ọzọ dị larịị ebe iko enweghị ike ma ọ bụ na-ekwesịghị iji ya.
Agba Acryli Ibé akwụkwọ